> Resource > PDF > PDF Recovery Mac: Sidee inuu ka soo kabsado PDF tirtiray on Mac
Waxaan soo kaban karto, tirtiray PDF Files on My Mac?
Hey, dhibaatadu ay tahay in qaar ka mid ah tirtiray PDF files aan on my qashinka Mac lagu gebi ahaanba laga saaray. Waxaan ognahay in ay tani waa khalad weyn laakiin weli waxaan la yaabanahay haddii uu jiro xal kasta oo igu soo noqda ka Mac ama aan heli PDF files aan. Walba oo soo jeedinaya in la aad wax ku oolka doonaa.
Tani waa dhibaato ah wax aad looga xumaado, oo weli waxaa jira fursad aad u soo celin PDF on Mac. Mid ka mid ah wax aad u baahan tahay in aad maskaxda ku hayso waa in kaliya marka xogta cusub ku Mac overwrites PDF files lumay ay doonaan weligood laga badiyay. Taas macnaheedu waxa weeye in aad u baahan tahay in aad joojiso qaadashada Mac, oo fiiriyaa barnaamijka PDF kabashada Mac ah si ay kuu caawiyaan.
Waa arrin shaqo fudud in la soo celiyo PDF on Mac haddii aad leedahay Wondershare Data Recovery for Mac gacanta. Waxa uu barnaamijkaaga u xunna loogu talagalay awood u kabsaday PDF files laga badiyay, tirtiray, formatted ama laga noocyada kala duwan ee qalabka, oo ay ku jiraan Mac, drive dibadda adag, kaararka xusuusta iyo flash drives.
Download version tijaabo ah Wondershare Data Recovery for Mac ay u bilaabaan PDF kabashada Mac hadda. PS: Haddii aad tahay user Windows ah, waxa kale oo aad ka heli kartaa version Windows ee Wondershare Data Recovery oo baro sida inuu ka soo kabsado PDF files lumay on computer Windows halkan: sida inuu ka soo kabsado files pdf lumay on computer Windows .
3 Talaabada si loo farsameeyo PDF Recovery Mac
Tallaabada 1-kabashada Mode inuu ka soo kabsado PDF on Mac
Marka bilaabay Wondershare Data Recovery for Mac, waxaad ka arki kartaa interface ku bilaabatay sidii la raaco, taas oo muujinaysa 5 fursadaha waxbarashada faahfaahsan.
Si aad u soo celin PDF lumay ama la tirtiro on Mac, aynu dooro "lumay Recovery File" mode in ay isku day ah.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha soo dajiyo qalab ku hadlo xijaab halkaas oo PDF files aad ayaa laga badiyay ka.
Tallaabada 2 Scan Barzakh u Khasaaray PDF
Markaas barnaamijka tusi doonaa sida image hoose, kuwaas oo dhan qoruhu la ogaan doonaa oo ku qoran. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan mid ka mid ah aad u socoto si loo soo celiyo PDF on Mac oo ka dhacay on "Scan" si ay u bilaabaan.
Fiiro gaar ah: Haddii PDF files aad ayaa laga badiyay ka qalab lagu kaydiyo dibadda, fadlan hubi in lagu aqoonsan karo sida drive adag on your Mac sameeyo.
Tallaabada 3 Ladnaansho PDF on Mac
Marka scan ay ka badan tahay, dhammaan faylasha helay oo ay ka mid PDF files aad la soo daabici doonaa sida hoos ku qoran. Waxaad ka eegi kartaa PDF files helay oo guji "Ladnaansho" in ay iyaga ku soo celi si aad Mac badbaadiyo.
Fiiro gaar ah: Waxaad ka eegi kartaa ansaxnimada PDF files helay ka hor inta wax iibsiga ee dib u soo kabashada. Iyo fadlan ha ka sii PDF faylka recoverable in ay goobta asalka ah si looga fogaado xogta overwritten.
Your dhan-in-mid PDF xal. Abuur, edit, diinta, annotate, ilaalin, darsamaan, watermark, cadaadin, oo saxiixa PDF files warshadaha-caadiga ah.
Gebi ahaanba bilaash ah PDF Wondershare hadalka Converter
Wondershare PDF hadalka Description
Aqoonta Character indhaha Recognition (OCR)
Download ku plugin Xaqa Wondershare PDF Editor OCR